China EDDHA-Fe6% စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Lemandou
ကောက်ပဲသီးနှံ၊ သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ပန်းများစသည်တို့အတွက်သံချို့တဲ့သောကြောင့်အော်ဂဲနစ် chelated သံဓာတ်မြေသြဇာဖြစ်သော EDDHA Fe သည်အဝါရောင်ရောဂါကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်။
၆.၀% min ။
၁.၅% min ။
၂.၀% min ။
၂.၅% min ။
၃.၀% min ။
၃.၆% min ။
၄.၀% min ။
၄.၂% min ။
၄.၈% min ။
30ppm max ကို။
ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောအလွန်သေးငယ်သော microelement ထိရောက်သောအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ် EDDHA Fe သည်အလွန်လျင်မြန်သောသံထုတ်လွှတ်နိုင်သောမြေဆီလွှာအမျိုးမျိုးကိုလုံခြုံစွာနှင့်ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
၎င်းသည်ပုံမှန်ကောက်ပဲသီးနှံများအတွက်သံဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးသောအရာ ဖြစ်၍ ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာကြီးထွားစေပြီးသီးနှံများ၏အရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည်။ ခိုင်မာသောခိုင်မာမှုတိုးတက်လာခြင်းနှင့်မြေသြဇာကျဆင်းလာခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် "အဝါရောင်ရွက်ရောဂါ" နှင့် "lobular ရောဂါ" ကဲ့သို့သောရောဂါများကိုထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Kraft အိတ် - ၂၅ ကီလိုဂရမ်ပိုက်အိတ်နှင့်အတူပိုက်ကွန်
အရောင်သေတ္တာ - အရောင်တစ်ဘူးလျှင် ၁ ကီလိုဂရမ်သတ္တုပါးအိတ်တစ်လုံး၊ သေတ္တာဘူးမှအရောင်သေတ္တာ ၂၀
စည်: 25 ကီလိုဂရမ်ကတ်ထူပြားစည်
၁။ အမြစ်ရေသွင်းခြင်း။ EDDHA Fe ကိုရေအနည်းငယ်ဖြင့်ပျော်ဝင်စေပြီးလိုအပ်ပါကသင့်လျော်သောရေပမာဏထည့်ပါ။ သစ်သီးပင်များ၏သရဖူသို့မဟုတ်စက်ရုံ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ၁၅-၂၀ စင်တီမီတာနက်သောတူးမြောင်းများကိုတူးပါ။ ဖြေရှင်းချက်ကိုတုတ်ကျင်းထဲကိုအညီအမျှလောင်းပြီးချက်ချင်းဖြည့်ပါ။ ဖြည့်စွက်ထားသောရေပမာဏသည်ဖြေရှင်းချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ တုတ်ကျင်းထဲ၌ညီမျှစွာဖြန့်ဝေပြီးအမြစ်ထဲသို့ထိုးဖောက်နိုင်သည်။
၂။ ယိုရေသွင်းခြင်းနှင့်ဖုတ်ခြင်းလျှောက်လွှာနည်းလမ်း - ရေသွင်းရေကိုပုံမှန်ဖြည့်စွက်သည်၊ ရေနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်၊ လျှောက်လွှာအရေအတွက်သည်သံချို့တဲ့မှုအပေါ်မူတည်သည်၊ သင့်လျော်သောပမာဏတိုးလာသည်သို့မဟုတ်လျှော့ချသည်၊ တစ်ဘူး၌မူ ၇၀ မှ ၁၀၀ ဂရမ်ဖြစ်သည်။
3. ရွက်မှုန်ရေမွှား: ရေနှင့်အတူ 3000-3000 အကြိမ်ရောနှင့်လျှောက်ထားပါ။
4. သစ်ရွက်မြေသြဇာအတွက်ရုတ်တရက်မြေသြဇာ၊ ဖလပ်ဓာတ်မြေသြဇာနှင့်ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ် EDDHA Fe သည်မြေဆီလွှာထဲမှ ၃-၁၂ pH ကြားထဲတွင်ကောင်းစွာစုပ်ယူနိုင်သည်။ (PH တန်ဖိုးပိုမိုမြင့်မားလေ EDDHA Fe သည် EDTA chelated iron နှင့် ferrous sulfate နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုအားသာချက်အားသာချက်) သီးနှံသည်ရေနှင့်အခြေခံဓာတ်မြေသြဇာမလုံလောက်ပါကဤထုတ်ကုန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဓာတ်မြေသြဇာတစ်မျိုးမျိုးမရှိခြင်းသည်အခြားဓာတ်မြေသြဇာများလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်ဓာတ်မြေသြဇာမရှိခြင်းကိုအသုံးမပြုမီဆုံးဖြတ်သင့်ပြီး၎င်းသည်အခြား chelated micro-ဓာတ်မြေသြဇာများဖြစ်သောသွပ်၊ မန်းဂနိစ်နှင့်မဂ္ဂနီစီယမ်တို့နှင့် တွဲဖက်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ EDDHA Fe ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအခန်းအပူချိန်တွင်သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူအဆင်ပြေစေရန်၎င်းကိုခြောက်သွေ့သောနေရာ၌သိမ်းဆည်းထားရန်အကြံပြုသည်။ ထုပ်ပိုးမှုကိုတစ်ကြိမ်အကြာတွင်တင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ခတ်သင့်သည်။
၅။ ကျွမ်းကျင်သူအကြံဥာဏ် - သစ်သီးပင်များ - သစ်သီးဝလံသစ်သီးဝလံသစ်သီးဝလံသစ်သီးဝလံသစ်သီးဝလံသစ်သီးဝလံသစ်သီးများမှာနှစ်ကြိမ်လျှောက်ထားပါ၊ ပထမအကြိမ်အရွက်သစ်ရွက်ပေါက်ချိန်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်ပန်းပွင့်များကျသောအခါဖြစ်သည်။ ပထမအသုံးပြုမှုနှုန်းမှာစက်ရုံတစ်ရုံလျှင် ၃၀ ဂရမ်ဖြစ်ပြီးဒုတိယနှုန်းသည်ထက်ဝက်ကျဆင်းသွားသည်။ ဒီထုတ်ကုန်၏ 1 ဂရမ်ရေ 0.5 လီတာထဲသို့ထည့်သွင်း, ပြီးတော့အမြစ်မြေဆီလွှာတွင်လျှောက်ထား, အမြစ်များကိုအညီအမျှ fertilized လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ။
Leguminous အပင်များ - သစ်သီးသစ်သီးရိတ်သိမ်းချိန်တွင်ပထမအကြိမ်သည်အသီးများကိုသီးပွင့်ချိန်တွင်နှစ်ကြိမ်အသုံးပြုပါ။ mu လျှင်ပထမဆုံးလျှောက်လွှာနှုန်းသည် ၂၅၀ ဂရမ်မှ ၅၀၀ ဂရမ်ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယထိပ်ဆေးထည့်သည့်ဆေးပမာဏသည်ထက်ဝက်ကျဆင်းသွားသည်။ ဒီထုတ်ကုန်၏ 1 ဂရမ်ရေ 0.5 လီတာနှင့်အချိုးအစားအရထုတ်ကုန်ကိုသန့်ရှင်းသောရေဖြင့်လုံးဝဖျက်သိမ်းပြီးနောက်အရွက်များပေါ်တွင်ဖြန်းသည်။
အပင်များ - ပဲပင်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်သောက်သုံးသော ရည်ညွှန်းကိုးကား၍ ရွက်သစ်ရွက်ပေါက်ချိန်တွင်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုပါ။
အခြားကောက်ပဲသီးနှံများကိုအထက်ပါအသုံးပြုနည်းကိုရည်ညွှန်းပြီးအသုံးပြုသင့်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်အသုံးပြုမှုပမာဏများလေ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုပိုကောင်းလေ၊
၂။ EDDHA Fe သည်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ လေထဲတွင်အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူနိုင်ပြီးစုစည်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
3. EDDHA Fe ၏အသွင်အပြင်နှင့်အရောင်သည်၎င်း၏ pH နှင့်ပြည့်စုံမှုကြောင့်ကွဲပြားသော်လည်း၎င်းသည်ထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးကိုမထိခိုက်ပါ။
ရှေ့သို့ EDTA TE chelated
နောက်တစ်ခု: ပိုတက်စီယမ် Fulvate